George Soros Xigashooyinkiisa: 58-kiisii ​​ugu fiicnaa iyo sida uu taajir ku noqday | Dhaqaalaha Dhaqaalaha
Dhaqaaleyahanno badan ayaa hodan ku noqday xirfadahooda dhaqaale iyo dareenkooda. Waxaa ka mid ah George Soros, aasaasaha iyo madaxweynaha Soros Fund Management LLC. Xilligan la joogo, saamiga maalgashadan ayaa gaaraya 8,6 bilyan oo doolar, taas oo ku kasbata inuu ka mid noqdo XNUMX-ka qof ee dunida ugu taajirsan, sida ay qortay Forbes. Sababtaas awgeed, waxaa suurtagal ah in weedhaha George Soros ay faa'iido iyo dhiirrigelin badan yeeshaan. Marka laga hadlayo waxqabadyadiisa samafalka ah, waa la amaanay. Taabadalkeed, mawqifkiisa siyaasadeed wuxuu si isdaba joog ah u abuuray khilaaf badan.
Suuqyada dhaqaalaha adduunka dhexdiisa, Soros waa mid ka mid ah mala-awaalayaasha ugu waaweyn, waana taas sababta uu hantidiisa uga dhigay. Sanadkii 1992 wuxuu sameeyay sharad caan ah oo ka dhan ah lacagta Ingiriiska. Waad ku mahadsan tahay dhaqaaqan halista ah in ka badan hal bilyan oo doolar ka sameysay maalin keliya. Dhacdadan ka dib wuxuu helay cinwaan ah "ninkii jabiyay Baanka England". Sanduuqa Quantum ee uu aasaasay wuxuu lahaa sanadle ah 33% in kabadan soddon sano. Haddii aad rabto inaad ogaato weedhaha caanka ah ee George Soros oo aad ogaato sida uu taajir ku noqday, ha moogaanin qodobkan.
1 58-ka weedhood ee ugu wanaagsan George Soros
2 Sidee ayuu Soros taajir ku noqday?
2.1 Sanduuqa Quantum
58-ka weedhood ee ugu wanaagsan George Soros
Dhaqaaleyahanada waaweyn sida George Soros waxay ku yimaadeen booskooda cilmi baaris adag iyo shaqo maalgashi sanado badan. Waqtigaas, qof kastaa wuxuu sameeyay khaladaad uu ka bartay oo uu ku hagaajiyay farsamooyinkiisa. Sidoo kale, waxay soo urursadeen xikmado aad iyo aad u badan sannadihii la soo dhaafay. Sidaas waxaa si weyn lagugula talinayaa inaad tixgeliso waxa ay leeyihiin maalgashadayaashan caanka ah. Marka xigta waxaan arki doonnaa liiska 58-ka weedhood ee ugu wanaagsan George Soros:
Kama shaqeynayo shaqadeyda samafalka dambi kasta ama baahi loo qabo in la abuuro xiriir wanaagsan oo dadweyne. Waxaan u sameeyaa sababtoo ah waan awoodaa inaan sameeyo, waana aaminsanahay. ”
“Dambi ka dhigida marijuana kama hor istaagin marijuana inay noqoto waxyaabaha ugu badan ee laga isticmaalo Maraykanka iyo dalal kale oo badan. Laakiin waxaa ka dhashay kharash fara badan iyo cawaaqib xumo. ”
“Waa inaan aqoonsanno, inaan nahay awoodda adduunka, waxaan leenahay masuuliyad gaar ah. Ilaalinta danaheena qaran, waa inaan horseed u noqono ilaalinta danaha guud ee aadanaha.
“Waxaa dib u soo cusboonaaday Yuhuud nacaybka Yurub. Siyaasadaha maamulkii Bush iyo maamulka Sharon waxeey ku darsadaan taas. Si gaar ah uma ahan naceybka Yuhuudda, laakiin sidoo kale waxay muujineysaa naceybka Yuhuudda. "
“Aniga ra’yigeyga, waxaa jira xal ku lug leh dimuqraadiyadda, maxaa yeelay dowladaha dimoqraadiga ah waxay ku xiran yihiin rabitaanka shacabka. Markaa haddii dadku rabaan, waxay abuuri karaan hay’ado caalami ah iyagoo adeegsanaya dawlado dimoqraadi ah. ”
“Suuqyada dhaqaalaha guud ahaan lama saadaalin karo. Marka waa inaad leedahay xaalado kala geddisan… Fikradda ah inaad si dhab ah u saadaalin karto waxa dhici doona waxay ka hor imaaneysaa habka aan suuqa u eego.
Xaaladda oo sii xumaanaysa waxay noqoneysaa, in yar oo ay qaadaneyso in la rogo, faa'iidada ayaa sii weynaaneysa.
"Markaan ogaanno in fahamka aan dhammaystirnayn uu yahay xaaladda aadanaha, ma aha wax ceeb ah in la khaldamo, kaliya in aan saxno khaladaadkeenna."
"Kordhinta, Shiinuhu wuxuu yeelan doonaa wax badan oo adduunka ah maxaa yeelay waxay u badali doonaan keydkooda doolarka iyo bondiyada dowladda Mareykanka inay u noqon doonaan hanti dhab ah."
Waxaan soo bandhigayaa aragti guud oo guud ahaan ah in suuqyada maaliyadeed ay yihiin kuwo aan xasilloonayn. Inaan run ahaantii hayno sawir been ah markaan ka fikirno suuqyo u muuqda kuwo isu dheelitiraya. "
Wadahadal buuxa oo cadaalad ah ayaa muhiim u ah dimuqraadiyada. "
Sharcigu wuxuu noqday ganacsi. Daryeelka caafimaad wuxuu noqday ganacsi. Nasiib darrose, siyaasaddu sidoo kale waxay noqotay ganacsi. Taasi runti waxay wiiqaysaa bulshada. "
"Sida ay u socoto howsha ka noqoshada mamnuucida aalkolada qaran waxay ku bilaabatay iyadoo dowlado gooni ah ay tirtirayaan sharciyada mamnuucaya iyaga, dowladaha shaqsiyaadka ah waa inay hada hogaamiyaan hogaaminta baabiinta sharciyada mamnuuca marijuana."
Goobaha suuqyada saamiyadu kama baxaan meel aan jirin. Runtii aasaas adag ayey ku leeyihiin, laakiin xaqiiqda waxaa qalday fikrad khaldan. "
Haddii argagixisadu leedahay naxariista dadka, way ka sii dhib badan tahay sidii loo heli lahaa. Sidaa darteed, waxaan u baahanahay dad dhinac naga ah, taasina waxay noo horseedaysaa inaan noqono hoggaamiyeyaal mas'uul ka ah adduunka, si aan u muujino xoogaa walaac ah dhibaatooyinka. "
"Nidaaminta iyo canshuuraha marijuana waxay isku mar badbaadin doonaan canshuur-bixiyeyaasha balaayiin doolar oo ah fulinta iyo kharashaadka xabsiyada, iyadoo la siinayo bilyanno doollar dakhli sanadle ah."
“Inta badan xumaanta adduunka ka jirta runti waa mid aan ku talagal ahayn. Dad badan oo nidaamka maaliyadeed ah ayaa waxyeello badan u geystay si kama 'ah.
Qarnigii XNUMX-naad oo dhan, markii ay jirtay caqliga laissez-faire iyo sharciyeynta oo aan ku filnayn, waxaa jiray dhibaatooyin ka dib midba midka kale. Dhibaato kasta waxay keentay dib-u-habeyn xoogaa ah. Tani waa sida bangiga dhexe u horumaray. "
"Hagaag, waad ogtahay, waxaan ahaa bani'aadam kahor intaanan noqon ganacsade."
Waxaan nahay ummada ugu awooda badan dhulka. Ma jiro awood dibadeed, ma jiro urur argagixiso oo naga guuleysan kara. Laakiin waxaan ku qabsan karnaa jahwareer. "
Waxaan u doortay Mareykanka inuu noqdo gurigeyga maxaa yeelay waxaan qiimeeyaa xorriyadda iyo dimuqraadiyadda, xorriyadda madaniga iyo bulsho furan.
- Dadka hadda xilka haya waxay ilaaween mabda 'koowaad ee bulsho fur furan, oo ah inaan khaldami karno iyo inay jirto dood bilaash ah. In ay macquul tahay in laga horyimaado siyaasadaha iyagoon wadaniyad aheyn. "
Waxaan ku arkaa dheelitirnaan aad u weyn adduunka. Aag aan dheelitirnayn oo lagu ciyaaro, kaas oo si xun u fooraray. Waxaan u arkaa mid aan degganeyn. Isla mar ahaantaana, ma arko dhab ahaan waxa dib u noqon doona. "
“Xagjirnimada suuqa waxay aqoonsan yihiin in doorka dowladdu ku leedahay dhaqaalaha had iyo jeer uu yahay mid carqaladeeya, aan waxtar lahayn guud ahaanna wuxuu leeyahay macno xun. Tani waxay ku hogaamineysaa inay aaminaan in habka suuqa uu xallin karo dhibaatooyinka oo dhan. "
Aasaasiyadaydu waxay taageerayaan dadka dalka jooga ee daneeya bulsho furan. Waa shaqadaada aan taageerayo. Markaas anigu ma ihi kan waxa samaynaya.
Suuqyadu waxay si joogto ah ugu jiraan xaalad aan la hubin oo qulqulaya, lacagtana waxaa lagu sameeyaa iyadoo la dhimo waxa muuqda iyo in la sharaddo waxyaabaha aan la filayn.
“Xaqiiqdu waxay tahay in suuqyada maaliyadeed ay khalkhal gelinayaan naftooda; mararka qaarkood waxay u janjeeraan xagga isu dheelitir la'aan, ee maahan isku dheelitirnaan. "
Tartan aan xaddidneyn ayaa dadka u horseedi kara ficillo ay sida kale ka qoomameyn lahaayeen.
Ayaa si aad ah uga faa'iideysta in marijuana sharci darro lagu sii hayo? Ka-faa'iideystayaasha ugu weyni waa hay'adaha waaweyn ee dambiyada ka wada Mexico iyo meelo kale oo bilyan doolar ka kasbada sannadkan ganacsigan sharci-darrada ah, oo si dhakhso leh u waayi doona faa'iidadooda tartanka haddii marijuana ay tahay wax soo saar sharci ah.
Suuqyada waxaa loogu talagalay inay u oggolaadaan dadka inay ka qayb galaan baahiyahooda gaarka ah iyo inay raadiyaan faa'iido. Runtii waa hal-abuur weyn oo weligay ma dhayalsan doono qiimaheeda. Laakiin looguma talagalin inay daboolaan baahiyaha bulshada. "
- Marka laga hadlayo cawaaqibka bulshada, dhammaantood waxay leeyihiin dad kala duwan oo siyaabo kala duwan u dhaqma, aad ayey u adag tahay xitaa in la helo halbeegga saxda ah ee guusha. Marka waa hawl adag. ”
"Markii aan lacag ka badan intii aan u baahnaa naftayda iyo qoyskayga aan ka helay, waxaan aasaasay aasaas aan ku dhiirrigelinayo qiyamka iyo mabaadi'da bulshada xorta ah ee furan."
"Bulsho furfuran waa bulsho u oggolaanaysa xubnaheeda heerka ugu sarreeya ee xorriyadda marka ay fulinayaan danahooda la jaanqaadaya danaha kuwa kale."
“Aad ayaan u aqaanay ninka magaciisa… Runtii wuu iga dhigay. Wuxuu iigu baahnaa ujeedooyinkiisa siyaasadeed, sidaa darteed waxaan ahay mala awaal ka mid ah male-awaalkiisa. "
"Marka waxaan u maleynayaa in waxa loo baahan yahay inay dhacaan ay tahay inuu u baahan yahay in xukunka laga tuuro."
"Uma maleynayo inaad arki doontid Fed oo ku boodaya dulsaarka dulsaarka."
"Waxaan filayaa in hoos u dhac weyn uu ku imaan doono kharashka macaamiisha Mareykanka marka la gaaro '07, mana arko waxa booskiisa qaadan doona, maxaa yeelay waxay muhiim u yihiin mashiinka dhaqaalaha adduunka. '
"Waxaan siiyaa ku dhowaad 500 milyan sanadkii adduunka oo dhan anigoo dhiirrigelinaya Bulshada Furan."
"Runtii waxaad u qabanaysaa wax sax ah naftaada maxaa yeelay waxaad kusii jirtaa xukunka, waxaadna dhigaysaa naftaada meel aad ka samatabixin karto saaxiibbadaada dhibaatada dhaqaale haysato oo uu ku jiro wiilkaaga, iwm."
“Waxaan u maleynayaa in fikradda guud ee ah in la ciribtiro dhibaatada daroogada ay tahay fikrad been ah,… Waad niyad jebin kartaa isticmaalka daroogada, waad mamnuuci kartaa isticmaalka daroogada, waad daweyn kartaa dadka daroogada caadaystay, laakiin ma tirtiri kartid . Markaad aqbasho qodobkan, waxaad horumarin kartaa qaab caqli gal ah oo ku saabsan dhibaatada. "
In ka badan kala bar kiisaska AIDS-ka ee ku lug leh carruurta waxay si toos ah ula xiriiraan cirbado wasakh ah. ”
"Hadday goobooyinku ka kooban yihiin fikrad khaldan, sida had iyo jeerba loo sameeyo, markaa weligeed lama sii wadi karo."
Waxaan u maleynayaa inaan lumiyay taabashadeyda waqti hore. Waxaan la mid ahay feedhyahan duug ah oo aan u baahnayn inuu galka galiyo.
Caqli xumida sharci darrada ah ayaa in muddo ah ii caddayd. Waxaan ka bartay marijuana caruurteyda waxaanan gartay inay aad uga wanaagsan tahay Scotch, waana jeclahay Scotch. Kadib waxaan u aaday dhaqtarkayga wuxuuna igu yiri: waan faraxsanahay. Khamri badan ma cabi kartid, aad ayaad ugafiican tahay inaad sigaar marijuana aad cabto.
"Waxaan ogaanay in sanduuq weyn oo la mid ah Quantum Fund uusan ahayn sida ugu wanaagsan ee maareynta lacagta… Suuqyadu waxay noqdeen kuwo aad u xasilan oo talaabooyin taariikhi ah oo qatar ku jira aan la adeegsan."
"Waxaad awood u leedahay inaad ku dhacdo dumis dhan haddii aad hoos u dhac ku yimaado dhaqdhaqaaqa dhaqaale ee xarunta, xitaa iyadoo cadaadiska sicir bararku uu sii kordhayo… Waxaan qarka u saarnay taas, haa."
"Laakiin dhawaanahan waxaan aragnay in suuqyada maaliyadeed ay mararka qaar u dhaqaaqaan sida kubbad burburinaysa, oo hoos u dhigaysa midba midka kale ee dhaqaalaha."
Maaddaama kor u kaca guryuhu, waxaa jiri doona hoos u dhac baahiyeed (oo saameynaya) dhaqaalaha adduunka.
“Runtii waxbaa ku jabay dhismaha dhaqaalaha adduunka. Waxaan hadda ku jirnaa bishii labaatanaad ee dhibaatada dhaqaale. Si kastaba ha noqotee, dhibaatadan ayaa soo ifbaxayay, waxay ahayd dhibaatadii sida weyn loo sugayay taariikhda dhow. "
Ilaa xadadan, wadamada daneynaya waxay ku heli karaan suuqyada caalamiga ah sicirka mudnaanta. Intaas wixii ka dambeeya, deyn bixiyeyaashu waa inay taxaddaraan. "
Hadda, kama aanan shaqeynin faahfaahinta, maxaa yeelay uma maleynayo inay aniga ila tahay inaan ka shaqeeyo faahfaahinta. Iyaga ayay u tahay inay ka shaqeeyaan faahfaahinta.
"Waxaa jira dhibaato aan u maleynayo inay soo ifbaxeyso, taasina waa dhamaadka guryo la'aanta ka jirta Ameerika iyo awooda qoysaska inay ku bixiyaan wax ka badan inta ay shaqaystaan ​​maxaa yeelay qiimaha gurigooda ayaa sii kordhaya."
Asymmetry-kan lagu daaweynayo amaahda iyo amaahda ayaa ah isha ugu weyn ee xasilooni darrada ka jirta nidaamka hanti-goosadka adduunka, waxayna u baahan tahay in la saxo.
Ujeeddadu waa in la siiyo maareynta ugu macquulsan qoyskeyga iyo aasaaska hantida taas oo sidoo kale soo jiidan karta maalgashadeyaasha kale ee leh ujeeddooyin isku mid ah, iyo in la dhiso qaab-dhismeed soconaya inta aan noolahay. "
Waxaan u maleynayaa inay u baahan tahay sii deynta lacagaha iyo xitaa xirmo ka weyn si loo helo xasillooni… Wax kasta oo qalad lagu sameyn lahaa khalad ayaa lagu sameeyay.
Waxaan aad uga walaacsanahay isku dheelitirka u dhexeeya sahayda iyo baahida, taas oo aad u adag.
“Runtii waxaan rabaa inaan caawiyo dadka dhaawaca ah. Hadana haddii aan sidaa sameeyo, waxaan dareemayaa in lacagtayda si fiican loo isticmaalay.
Jarmalku waxay u muuqdaan inay iloobaan hada markii euro uu ahaa abuuritaan Franco-German ah. Ma jiro waddan ka faa’iideystey lacagta Euro-ka oo ka badan Jarmalka, siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaanba. Sidaa darteed, waxa ku dhacay keenista lacagta euro inta badan mas'uuliyadda Jarmalka. '
Sidee ayuu Soros taajir ku noqday?
Hadda oo aan aqrinnay weedhaha George Soros, waxaan u sharaxaynaa wax yar oo ku saabsan dhabbihiisa si aan si fiican u fahamno. Kadib carruurnimadii adkayd iyo dhallinyarnimadii intii lagu jiray Dagaalkii Labaad ee Adduunka, oo uu ka caawiyey aabihiis inuu ka been-abuuro dukumintiyada asxaabtiisa reer Hungaria intii lagu jiray xasuuqii, George Soros wuxuu waxbarashadiisa ka bilaabay 1947 Dugsiga Dhaqaalaha ee London. Halkaas, la taliyihiisii ​​iyo falsafadiisii ​​Karl Popper wuxuu isaga ku beeray ereyga 'bulsho furan', kaas oo matalayay gabi ahaanba kasoo horjeedka kaligii taliyeyaasha in isaga iyo qoyskiisuba badbaadeen. Intaas waxaa sii dheer, ereygan waxaa lagu sheegay weedho ka mid ah George Soros. Afar sano kadib markuu dhamaystay shahaadadiisa, dhaqaaleyahan reer Hangari ah wuxuu shaqo kahelay dhanka maaliyada Bangiga London.
Sannadkii 1956, George Soros wuxuu shaqo ka helay hawl-wadeen dhexdhexaadin ah oo ka hawlgala FM Mayer oo ku yaal New York, halkaas oo uu ugu wareegay Mareykanka. Kadib shaqooyin dhowr ah sida falanqeeye iyo hawl wadeen shirkado kala duwan oo Wall Street ah, Hangari-ga wuxuu ku guuleystey inuu maareeyo maalgelintiisii ​​ugu horreysay ee badda, Sanduuqa Eagle ee Koowaad, gudaha Arnold iyo S. Bleichroeder. Guushiisa awgood wuxuu awood u yeeshay inuu abuuro sanduuq labaad oo uu ugu magac daray Double Cigale Fund.
Sannado kadib, 1973, Soros iyo Jim Rogers, kaaliyihiisii, waxay sameysay shirkadda Soros Fund Management. Lix sano ka dib iyo qaab dhismeedka sanduuqa deyrka, waxaa loo beddelay Quantum Fund. Tan iyo markii la aasaasay sanduuqan, soo laabashadiisu waxay ahayd 3,365% wuxuuna helay soocelin 47% intii lagu jiray tusmada SP500.
Heerka ay shirkadan cusub ku socotay, sanadkii 1981 kororkeedu wuxuu u dhigmaa 381 milyan oo doolar. Dhanka kale, qiimaha George Soros waxaa lagu qiyaasay in ka badan $ XNUMX bilyan. Isla sanadkaas, goorma Maal-galiyaha Hay'addu wuxuu u aqoonsaday Hangariya inuu yahay "maareeyaha taleefanka ugu weyn adduunka", Jim Roger wuxuu ka tagay shirkadda. Sidoo kale cinwaanada noocan ah waxay kugula talinayaan inaad akhriso weedhaha George Soros. Afar sano kadib, sanadkii 1985, Sanduuqa Quantum wuxuu soosaaray soocelin dhan 122% 1986kiina wuxuu dhaafiyey $ 1,5 bilyan.
1989, Soros wuxuu go'aansaday inuu qoro Stanely Druckenmiller si uu u maamulo Sanduuqa Quantum. Markaan fiirino 1993, waxay ku guuleysatay inay soo saarto sanadle ah 40%. Si kastaba ha noqotee, waxa ku riixay nasiibkii George Soros wuxuu ahaa hawlgalkii uu ka fuliyay lacagtii Ingiriiska sanadkii 1992. Dhaqdhaqaaqani wuxuu u keenay hal bilyan oo doolar, marka lagu daro faa iidooyinka uu ka helay hawlgallada kale ee suuqa saamiyada ee Tokyo, lacagta Talyaaniga iyo taajka iswiidhishka. Sida laga soo xigtay qiyaasaha, George Soros wuxuu kasbaday isla sanadkaas qiyaastii 650 milyan oo doolar. Ka dib, wuxuu bilaabay inuu kala duwanaado maalgashiyadiisa isagoo abuuraya lacago cusub oo ka tirsan Quantum.
Xigasho Ray Dalio
Sidaad aragto, raadadka dhaqaalayahankani wuxuu ahaa mid dheer oo dhib badan. Si kastaba ha noqotee, adkaysi iyo samir wuxuu ku guulaystay inuu ka mid noqdo boqolka qof ee adduunka ugu taajirsan. Waxaan rajeynayaa in xigashooyinka George Soros ay kugu dhiirrigeliyeen kuna dhiirrigeliyeen inaad raacdo safarkaaga dhaqaale. Ogaanshaha taariikh-nololeedka maalgashadayaasha caanka ah ee ku guuleystay xorriyadda dhaqaale waa mid ka mid ah xulashooyinka ugu wanaagsan ee aan ku qancin karno inaan annaguna guuleysan karno. Sidoo kale, annagoo kaashanayna talooyinkaaga iyo milicsiga waxaan haysanaa wax yar oo fudud.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Dhaqaalaha guud » George Soros Xigasho
Codsiyada lagu kasbado lacag
Qeexitaanka sicir bararka